Weerar ay ka qeyb qaateen ciidamo Maraykan ah oo lagu qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen Al-shabaab – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Weerar ay ka qeyb qaateen ciidamo Maraykan ah oo lagu qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen Al-shabaab
Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose ayaa waxay sheegayaan in ciidamo huwan ah oo ka kala tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, maamulka Jubbaland, Mareykanka iyo kuwa AMISOM ay weerar xoogan ku qaadeen saldhigyo ay Xarakada Al-shabaab ku leedahay duuleedka magaaladaas.
Weerarkan oo ahaa mid aan loo kala harin ayaa la sheegaya inay ka dhasheen qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana uu weerarka ka dhacay degaanadda Buulo-gaduud, Baar iyo Burkooy ee duuleedka Kismaayo.
Goobaha la weeraray ayaa waxaa ku sugnaa saraakiil iyo ciidamo badan oo ka tirsan Xarakada Al-shabaab, iyadoona dhinaca kale la sheegayo in xarumahahaasi ay ahaayeen goobo ay Shabaabka ku kulmaan.
Ilaa iyo haatan lama oga inta uu la egyahay qasaaraha ka dhashay weerarkaasi, waxaana saacadaha soo socdo la filayaa in saraakiisha dowladda Soomaaliya ay faahfaahin ka bixiyaan qasaarihii ka dhashay weerarkaasi.
Dhinaca kale, ciidamo ka tirsan Al-shabaab ayaa la sheegay inay miino ku xirtay isla markaana ay jartay buundadii Wirkooy oo ahayd buundo looga gudbi jiray wabiga Jubba.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaan ayay ahayd markii dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday in howgal ka dhan ay Al-shabaab laga bilaabi doono gobolada Jubbooyinka, iyadoona uu weerarkaan u muuqdo mid ay dowladdu ka dhabeynayso hadalkeeda.